Somaaliyaa: Lammii Somaalee Ambulaansiiwwan tolaa duuba jiru - BBC News Afaan Oromoo
Magaalaa guddoo Somaaliyaa- kan yeroo hedduu haleellaawwan boombii irraa hin fagaanne keessatti tajaajilli ambulaansii bilisaa waggaa 13 dura Abdulqaadir Abdiirahmaan Adaniin hundaa'e tokko qofaatu argama.
Abdulqaadir biyya Paakistaanitti barnoota isaa waldhaansa fayyaa xumuree wayita deebi'u, daandiwwan Moqaadishoorratti ambulaansiiwwan tajaajila kennan dhiibanii namoonni dhukkubsataa wasaasoon baatanii yoo deeman arguun itti hin tolle.
Ambulaanisiiwwan muraasni jiraniis gaaffii hospitaalota dhuunfaarraa dhiyaatuuf deebii kennu, dhukkubsattootniis akka kaffalan gaafatamu.
Kan erga argeen booda Dr. Abdulqaadir tajaajila Abluaansii tolaa eegale
''Minibaasii biteen, namootni wiilcheriin socha'aniis akka mijatuufiittin sirreesse'' jechuun BBC'tti himeera.
Namoota madaawaniifi dubartoota ulfaaf tajaajila kennuus jalqabe.
Sana boodas dhaabbileen dhuunfaa Ambulaansii dabalataa akka nuu bitan gaafannee jedha Dr. Abdulqaadir.
Wayita kana Abdulqaadir yunivarsiitiwwaan magaalittii keessa jiran keessatti hojii barsiisummaa dhaabbii hin taane hojjetu turan.
''Barattoota kootiin yoo lubbuu baraaruu barbaadan ji'atti doolaara tokko gumaachuun obbolaa isaanii dhiiraa fi dubaraa akka gargaaraniin gaafadhe'' jedha.
Sana boodas bakka deeme hundatti namni hunduu ji'atti doolaara tokko akka gumaachu gaafata.
Aamiin jechuun Amantaa jechuu yoo ta'u jiraattootni magaalitti hedduun biyya namoota siyaasaan miidhamte keessatti akka maqaa ishee kan ta'e jechuun ibsu.
Har'a Aamin Ambulaansii deeggarsa uummatarraa argatuun hojjettoota 35 harka caalaan isaanii warra fedhiin kaffaltii malee hojjetan qabaa jedha Dr. Abdulqaadir.
Amma Ambulaansiiwwan 20 konkolaachiftoota isaanii waliin qaba.
Mootummaarraa gargaarsi aragatan akka hin jirreefi deeggarsuma hawaasaa fi dhaabbileen tajaajila kennaa akka jirus dubbatu.
''Dhiyeenya kana waajirri kantibaa magaala Moqaadishoo guyyaatti boba'aa liitira 10 yoo nu gargaaru ta'e jennee gaafannee deebi isaanii eegaa jirra.''
'Uummatni Somaalee arjaadha'
Dr. Abdulqaadir dhaabbilee idila addunyaa akka Biyyoota Gamtoomanii waliin hariiroo cimfachaa jira.
Dhaabbatni Fayyaa Addunyaas (WHO) konkolaattota lama arjoomeeraaf. Embasiin Briteen Moqaadishootti argamus maallaqa walitti qabuuf dorgommii maaraatoonii walakkaa qopheessaa akka jiru BBCtti himaniiru.
Ambulaansiin Aamin gaazexessitootaaf ragaa wayitawaa waan kennaniif, mootummaan lakkoofsa namoota balaawwaan boombiin du'anii to'achuuf jecha bakka balaa boombiitti akka hin argamne dhorkaa jira.
Dr. Abdulqaadir garuu wanti irratti xiyyeefatamuu qabu lubbuu namaa baraaruudha jedha.
Somaalonni bayyee arjaadha, deeggarsi lammiileen biyyatti biyya alaa jiran guddina biyyaaf godhan guddaadhas jedha ogeessi fayyaa kun.
Tajaajilli Ambulaansii Aamin magaala Moqaadishorra ce'ee guutuu biyyatti akka tajaajilus fedha qabu.
Haata'u malee al-shabaab ammallee kutaalee biyyattii baadiyaatti yaaddoo ta'uun isaa fedha kanatti danqaa ta'uun hin oolle.
''Dhaabbata daldalaaf hundoofne miti, bu'aaf miti kan hundoofne, fedha siyaasaa irraas bilasa. al- Shabaab nurraa wanti barbaadu jira jedhee hin yaadu.''
Tajaajilli ambulaansii bilisaa kun magaalaa guddittii Somaaliyaa keessatti, waggoota darban kudhanii ol keessatti hojii lubbuu baraaruu keessatti gahee guddaa baheera.